कसरि बचाउने त दुखी डलर अमेरिकामा? अचुक फर्मुला जसले तपाईँको आखा खुल्न सक्छ​! – BRTNepal
कसरि बचाउने त दुखी डलर अमेरिकामा? अचुक फर्मुला जसले तपाईँको आखा खुल्न सक्छ​!
बिआरटीनेपाल २०७३ मंसिर ७ गते २२:११ मा प्रकाशित
‘जाने श्रीखण्ड, नजाने खुर्पाको बिँड’ भनेजस्तै आफ्नो नियमित व्यवहार र गतिविधिले तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा ठुलो फरक पार्दछ र महत्त्व राख्दछ पनि । तपाईँ हाम्रा आर्थिक समृद्धशाली बन्ने, जीवनलाई सरल र सहज ढङ्गले चलाउने र आफ्नो प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित र सन्तुलित गर्न सके भविष्यमा थुप्रै अप्ठ्यारा आर्थिक कठिनाइ र समस्याबाट गुज्रिने अवस्थाबाट बचाउन सक्दछ । हामी संसारको समृद्धशाली र अवसर र आर्थिक स्वतन्त्रताको मुलुक अमेरिकामा बसेको भनिए पनि सोचेजस्तो र कल्पना गरेजस्तो छैन यो अमेरिका । कडा परिश्रम गर्नैपर्छ । काम गर्नैपर्छ र श्रम गर्नैपर्छ, जीवन चलाउन र बिल तिर्न । अमेरिकामा श्रमको सम्मान त छ नै । आफ्नो परिश्रमबाट आर्जेको पारिश्रमिक र अर्थ सन्तुलित, व्यवस्थित र निगरानीपूर्वक चल्न चलाउनसकिएन भने अमेरिकामा रहे पनि हामीले सोचेजस्तो आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सकिँदैन । र, सर्वदाअभावमै जीवन गुजार्नुको अर्को विकल्प छैन पनि । आफूले आर्जन गरेको डलर कसरी बचत गर्नसकिन्छ ? कसरी खर्च कटौती गर्न सकिन्छ ? कसरी कम खर्च वा डलरबाट बढीभन्दा बढी सुविधा रसहुलियत प्राप्त गर्न सकिन्छ ? यसका लागि आवश्यक उपायहरू कसरी अवलम्बन गर्ने र कसरीजानकारी प्राप्त गर्ने भन्ने कुराहरू बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले मैले खर्च कटौतीका उपायहरू सबैलाईउपयोगी हुनसक्छ भन्ने अभिप्रायले यहाँहरू माझ यो लेख प्रस्तुत गरेको छु ।
कसरी आफ्नो औकातभन्दा बढी वा कमाएको भन्दा कम खर्च गर्ने भन्ने नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । कमाउने ५ डलर तर खर्च गर्ने त्योभन्दा बढी हुँदा हाम्रो दैनिक जीवन असन्तुलित र अव्यवस्थित हुन पुग्दछ । आफूले सामान किन्दा अनलाइनबाट खरिद गर्दा सस्तो पर्न आउँछ । त्यसै गरी घरमा टेलिफोन, इन्टरनेट र टिभीलाई बन्डलको रूपमा एकमुष्ट सेवा लिँदा पैसा निकै सस्तो र सहुलियत हुन्छ । आफ्नो क्रेडिट स्कोरमा सुधार ल्याउने, सहुलियतमा प्राप्त हुने वस्तुहरू किन्दा रिवेटको अवसर हेर्ने, घरमा ग्यासबाट हिटर प्रयोग गर्ने, बेलाबेलामा मोर्टगेज कम्पनीलाई ब्याजदर घटाउन अनुरोध गर्ने, आफ्नो क्रेडिट कार्डमा ब्याजदर घटाउन अनुरोध गर्ने, घरलाई समयपश्चात् रिफाइनान्स गराउने, घरको बिमा लिँदा निजी बिमा कम्पनीलाई निगरानी राख्ने आदि कार्यबाट थुप्रै डलर बचाउन सकिन्छ । त्यसै गरी म्यागेजिन, किताब, डीभीडीहरू खरिद गर्नुभन्दा लाइब्रेरी र रेडबक्स वा रेन्टल सेवाबाट सस्तो पर्न जानेछ । त्यसै गरी कार किन्दा अनलाइनबाट सस्तो डिलरहरू हेर्न सकिन्छ । जसबाट पनि केही डलर बचाउन सकिन्छ । बैङ्कमा चेकिङ खाता खोल्दा शुल्क नलिने बैङ्क खोज्ने, शुल्क लिन थालेमा अर्को बैङ्क परिवर्तन गर्न सकिनेछ । बचत खातामा ब्याज पनि आउने हुँदा खाता खोल्नुअघि राम्ररी सोधपुछ गरी निःशुल्क खाता खोल्दा वर्षमा केही डलर बचाउन सकिनेछ । घुम्दा, भ्रमण गर्दा, रिवार्ड कार्डहरू प्रयोग गर्ने, क्रेडिट कार्डको शून्य ब्याजदर र गतिविधिलाई निगरानी राखिराख्ने र सकेसम्म क्रेडिक कार्ड प्रयोगमा कमी ल्याउने गर्नुपर्दछ ।जसले तनावबाट बचाउँछ र डलर पनि जोगाउँछ ।
किफायती बानी व्यवहारबाट पनि हाम्रो दैनिक जीवनमा ठुलो राहत पुग्दछ । घरमा फ्लोरसेन्ट बत्ती प्रयोगगर्ने, पानीको प्रयोगमा किफायती गर्ने, फोहोर कम्पनीलाई हप्ताबाट अर्धमासिक सेवामा लैजाने, घरमाप्रयोग नहुने कोठाको भेन्टिलेसन बन्द गरी तातो र चिसो लगाउँदा उठ्ने खर्चमा कमी गराउने । त्यसैगरीकार–गाडी प्रयोग खरिद तथा प्रयोग गर्दा सकेसम्म प्रयोग गरिसकेको किन्ने र लामो समयसम्म चलाउने ।बिमा किन्दा प्रिमियम नकिन्ने, जसबाट थुप्रै डलर जोगाउन सकिनेछ । कार, सम्पति वा घरको बीमाकिन्दा सकेसम्म डिटक्टेबल मूल्य बढाउँदा सानातिना क्षतिहरू आफैँले ब्यहोर्दा बिमा बढ्ने भएमा त्यस्तोबीमा हटाइदिने । त्यसो गर्दा खराब बिमा रेकर्ड रहने अवस्थाबाट बच्न सकिनेछ । त्यसै गरी क्षतिको बीमार अवस्था हेरेर र बुझेर मात्र बिमाबाट भुक्तानी दाबी गर्दा भविष्यमा बिमाबाट लाग्ने अतिरिक्त शुल्क वामूल्यबाट बच्न सकिनेछ ।
त्यसै गरी सेलफोन प्रयोग गर्दा वा गरिएको छ भने घरको जमिन लाइन फोन हटाइदिने र किफायती बन्ने । इन्टरनेट सेवा कम चलाउने । टिभीका अनावश्यक च्यानलहरू हटाइदिने । सेलफोन किन्दा परिवारको अन्य सदस्यलाई समेत हुनेगरी सस्तो ‘परिवार योजना’अन्तर्गत लिँदा सस्तो र किफायती हुन्छ । सकेसम्म प्रिपेड फोन प्रयोग गर्दा धेरै नै सस्तो पर्न जान्छ । त्यसै गरी विवाह, भोज, ब्रतवन्ध वा अन्य जमघट तथा समारोहकोउपहारमा सीमित, सहुलियत, आवश्यक र किफायती ढङ्गले आफूलाई सीमावद्ध गर्दा ठुलो समुदायमा बस्नेमानिसहरूलाई धेरै राहत पुग्न सक्छ । घरमा सकेसम्म शाकाहारी बन्दा किफायती बन्न सकिन्छ । मासु,मसला वा अन्य सौखिन खाना कटौती गरी स्वस्थ खानातर्फ जोड दिँदा धेरै खर्च कटौती हुन पुग्दछ ।आफू सकेसम्म स्वस्थ रहने, स्वस्थ का लागि हरदम प्रयास गर्ने । जसबाट डाक्टरकहाँ धाउने, औषधिकिन्ने आदि खर्चबाट बच्न सकिनेछ । हेल्थ क्लबको सदस्यता नलिने, काममा जाँदा घरबाटै खाना लैजाने,बाहिर खाने बानीमा कमी ल्याउँदा बढी स्वस्थ हुनुका साथै किफायती पनि हुन्छ । धूम्रपान गर्दै नगर्ने ररक्सी सेवन गर्ने बानी भएमा त्यसलाई कमी गर्न सके स्वस्थ हुनुका साथै बिमामा कमी र पैसा जोगाउनसकिनेछ । जीवन बिमा किन्दा समयसीमा जीवन बिमाबाट अतिरिक्त शुल्कबाट बच्न सकिनेछ । त्यसै गरी स–साना बस्तुहरू किन्दा वारेन्टी अफर स्वीकार नगर्दा राम्रो हुन्छ । सामान किन्दा सस्तो वा संख्यात्मकभन्दा बढी गुणात्मक सामान खरिद गर्नुपर्छ । गुणात्मक सामान किन्दा बढी मूल्य परे पनि अन्ततोगत्वा यसबाट खर्चमा कमी आउँछ । गुणात्मक किन्दा एक पटक चिन्ता हुन्छ भने सस्तो किन्दा सधैँ चिन्तित हुनुपर्छ । सामान किन्दा रिवेट, एउटा किन्दा अर्को सीत्तैमा वा दुई वटा किन्दा अर्को सीत्तैमा जस्ता सहुलियत अमेरिकामा प्रसस्तै देख्न र सुन्न पाइन्छ । यो मुलुकको अर्थब्यवस्था तथा बजार सहुलियत सिद्धान्तमा आधारित छ ।
त्यसै गरी काम गर्दा अवकासपछि जम्मा भएको पैसा निम्न खर्चअन्तर्गत संयुक्त कोष ४०१ (के) मा ध्यान दिनुपर्छ । यसबाट पे चेकमा कमी आउँदैन र भविष्यमा उचित कोष जम्मा हुन पुग्दछ । सकेसम्म रोजगारदाताबाट प्राप्त हुने ४०१ (के) को योगदानको फाइदालाई हेर्नुपर्दछ । त्यसै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सेवा प्रयोग गरेवापत तिर्नुपर्ने भुक्तानी समयमै तिर्ने, भुक्तानी झुक्किने समस्यामा कमी ल्याउनुपर्छ । र, यसलाई सकेसम्म व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । जसबाट पनि थुप्रै डलर जोगाउन सकिन्छ । आफ्नो बिल बैङ्कमार्फत आफ्से आफ तिर्ने प्रणाली वा भुक्तानी सकेसम्म नबिर्सिनु नै राम्रो हुन्छ । घरमा इन्सुलेसन प्रयोग गर्दा खर्च र वातावरण जोगिने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिने । परिवारमा सौहाद्र्धता बढाउने, मितब्ययी सिद्धान्त पालना गर्ने, असौहाद्र्धता, डिभोर्स वा बेमेलले ठुलो धनराशि खर्च हुन्छ । सकेसम्म सामान वस्तु खरिद गर्दा कुपन सहुलियत प्रयोग गरी ग्रोसरी किन्ने । शनिवार र आइतबारका पत्रिका, मेलमा आउने विभिन्न सहुलियत अफरको प्रयोगबाट पनि धेरै पैसा बचत हुन्छ । त्यसै गरी सप्ताहन्तमा लाग्ने मेला फ्लि मार्केट, कृषक बजार, यार्ड सेल आदिमा किनमेल गर्दा पनि धेरै डलर बचाउन सकिन्छ ।
घरमा विद्युतीय वस्तु एवं ग्यास प्रयोगमा व्यवस्थापन र निगरानीले पनि धेरै पैसा जोगाउन सकिनेछ । ग्यास प्रयोगमा कमी ल्याई डलर बचाउन व्यवस्थित रुटिङ बनाउन जरुरी छ । घरमा सकेसम्म पिगी बैङ्क, खुत्रुकेमा पैसा सङ्कलन गर्दा आपत्कालीन अवस्थामा ठुलो राहत पुग्दछ । अपार्टमेन्ट लिँदा वा घरभाडामा बस्दा अर्को साथी पनि राख्दा किफायती हुन जानेछ । सकेसम्म आफ्नै बगैंचामा तरकारी, फलफुल लगाउने, ग्यास उपहार कार्ड प्रयोग गर्ने, पसलमा मिनरल वाटर किन्नुभन्दा घरमा वाटर फिल्टर राख्ने र विभिन्न अफरहरू आउँदा सकेसम्म ‘नो’ भन्ने बानी बनाउन जरुरी छ । त्यसै गरी आफ्नो आम्दानी राम्रो छ भने सरकारलाई नढाँट्ने, फूड स्टाम्प, विक जस्ता सामाजिक सरकारी सहुलियतहरू सकेसम्म प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ । यदि कम आम्दानी छ भनेचाहिँ यी सेवाहरू लिँदा हुन्छ ।हरेक ६-६ महिनामा तपाईँको सेल फोन कम्पनी, घरको फोन कम्पनी र फेम्लि प्लानको फोन कम्पनीको कस्टुमर सर्भिसमा कल गरी डिल माग्नुहोस वा उनीहरूको ग्राहक प्रमोसन नीति अन्तर्गत सहुलियत माग्नुहोस त्यसबेला कम्तीमा २ सय डलर जति वर्षमा जोगाउन सक्नुहुनेछ।
त्यसै गरी बाइ १ गेट १, अर्थात् बाइ १ गेट २, २०% अफ, ३०% अफ, ५०% अफ कहिलेकाहि त क्लिलिरियन्स गर्दै गरेका वस्तुहरू, आउट अफ बिजिनेसमा जादै गरेका वस्तुहरूको विज्ञापनहरू हेर्दै गर्नुहोस् जहा तपाईँले भने जस्ता सामानहरू निक्कै सस्तोमा पाउनु हुनेछ। कहिले काहि यार्ड सेल, फ्लि मार्केटमा पनि तपाइका चाहना, आवश्यकता र रोजाइका मज्जाका वस्तुहरू असाध्यै सस्तोमा पाउनु हुनेछ जसबाट तपाईँको ठुलै रकम जोगिन जानेछ।
हुलमुलमा ज्यान जोगाउनु, अनिकालमा अन्न जोगाउनु भने जस्तो तपाईँले अमेरिकामा साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक, मासिक, ब्लाक फ्राइडे, क्रिसमस, थ्यान्क्सगिभिङ्ग, नयाँ वर्ष, लेबर डे, इन्डिपिडेन्स डे लगायतका राष्ट्रिय पर्व तथा बिदाहरुमा सामानहरू असाध्यै डिलमा पाउनु हुनेछ। यसबाट तपाईँको ह्यान्डसम डलर जोगिन जानेछ। तपाइ जस्तै अक्शन हुने समय र मिति वाच गरिराख्नुहोस। यस्ता अक्शनहरुमा तपाले भने जस्तो सामान कौडिको मूल्यमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
यी सबै तपाइका हातमा छ। कसरि किफायति बन्ने र किफायति कसरि बन्ने भन्नेमा। जाडोलाइ चाहिने लुगाफाटाहरु गर्मी लाग्न थाले पछिको क्लिरियन्सको डिलमा किनि राख्नुहोस हसले तपाईँको घरमा थुप्रै सदस्य छ भने आफै बिचार गर्नुहोस् तपाईँले थुप्रै सय डलर बचाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी गर्मीका लागि चाहिने सामानहरू जाडो लाग्न थालेपछि भटाभट सस्तो डिलमा पाइन्छ। किनेर राखिराख्नुहोस जसले ठुलो रकम बच्नेछ तपाईँको। यस्ता सिजनेबल सामानहरुको ट्रिकि म्यानेजमेन्टले तपाईँको डलर नप्त्याउने गरी बचाउने गर्दछ।
ग्रोसरि किन्दा डिल हेर्नुहोस्, शनिवार र आइतबार वा कम्पनीले बारम्बार पठाउने विज्ञापन कुपनहरु जोगाएर राखुनुहोस, जसले तपाईँको वर्षमा ठुलै डलर बच्नेछ। बेलैमा बुद्धि पुर्याउनुहोस, जोगिएको डलर तपाईँले सेभिङ्ग नै गर्नु भयो भने उक्त रकम अन्य महत्त्वपूर्ण काममा लगाउन सकिनेछ तर उमेर छदा, शक्ति, ऊर्जा र मै खाँउ मै लाउ भन्ने बेलालऐ मै मत्ता भई कमाएको जति खर्च गर्न थाल्नु भयो भने ऊर्जा सकिएको र काम गर्न नसकेका दिन तपाइ अमेरिकामा पश्चातापको भुमरिमा डुब्नु हुनेछ। कमाएकै छु के भयो र खर्च गर्दा? फेरि कमाइहाल्छु भनेर उखरमाउलो भई कमाएको धनलाइ बचत गर्ने शैली सिक्नु भएन भने तपाईँलाई अमेरिकाम अप्ठेरो पर्न सक्छ जुन दिन तपाइ डाक्टर र अस्पताल धाउन थाल्नु हुनेछ त्यसबेला ढिलो भैसक्नेछ।
यस्ता थुप्रै उपायहरू छन्, जसबाट तपाईँ हामीले आर्थिक बचतका साथसाथै मानसिक शान्ति पनि प्राप्तगर्न सकिन्छ । आर्थिक व्यवस्थापन, किफायतीपन र सन्तुलनले हाम्रो दैनिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाखेल्दछ र शान्ति प्राप्तिको एक माध्यम हुन सक्छ । आफ्ना आनीबानी र फजुल खर्च कटौतीमा कमील्याउन कतिपय अवस्थामा आफ्ना प्रवृत्तिमै परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ भने कतिपय अवस्थामानजानेका ध्यान पुर्‍याउन नसकिएका जानकारीहरू आफ्ना साथीभाइ, समाज, समाचार, अनलाइन वाअन्य माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । असम्भव केही छैन । आजैबाट मितब्ययी बन्न सिकौं र आर्थिकस्वतन्त्रताको अवसरलाई सदुपयोग गरौँ ।